Cabdiweli Maxamed Cali-Gaas oo Shir Jaraa’id ku qabtay Gaalkacyo .[War-saxaafadeed].
Galkacyo, Soomaaliya 05 November 2012) Waxaaa maanta shir-Jaraa’id ku qabtay hoyga uu ka dagan yahay Magaalada Gaalkacyo Mudane Cabdiweli Maxamed Cali-Gaas oo ahaa Ra’iisul Wasaarihi hore ee Soomaaliya haddana ah Xubin kamid ah Xildhibaanada Federaalka Soomaaliya.
Mudane Cabdiweli Gaas ayaa ilaa 19kii bishii la soo dhaafay safaro ku marayey qaybo ka mid ah Gobolada Puntland isaagoo la soo kulmay qaybaha kala duwan ee Bulshadda Deegaanaddii uu tagay sida Galkacyo, Goldogob, Bursaalax, Xerro Jaale, Bayra, Riig-O-manne, Bacaad weyne, Xarfo, Burtinle, Jallam, Kala-Bayr, Garowe, Sunna-Jiif, Danqoronyo, Qardho, Carmo, Bosaaso, iyo qaarkale.
Mudane Gaas ayaa dhammaan degaanadii uu tagay bulshada ku nool ka waraystay xaaladaha guud sida Amniga, caafimadka, waxbarashada, dhaqaalaha, Dimuqraadiyadda iwm isagoo mid-mid u tagay Isbitaalada, Jaamacadaha, dugsiyada H/dhexe, Sare, iyo xarumaha dadweynaha.
Waxaa ku habboon maamulka iyo baarlamaanka lagu soo doortay laguna dhaariyey in ay ugu adeegaan xilkooda afarta sanno ee labada bilood ka dhimanyihiin in ay tixgaliyaan dhawraanna rabitaanka shacbiga. Waxaan ku baraarujinayaa maamulka iyo baarlamaanka in aysan galin dalka mugdi iyo khalkhal siyaasadeed oo laga maarmikaro. Waxaa mudan in marwalba danta guud laga hormariyo danta iyo maslaxadaha khaaska ah.
Mudane Gaas ayaa wuxuu ka hor mariyey warbixintiisa guud in ay jireen aqabado yar yar ee uu kala kulmay safarkiisii balse uu go’aan saday in uusan waxba kasoo qaadayn kagana gaabsaday in uu kudaro warbixintiisa.
Lifaaqa waa Warbixintii Mudane Cabdiweli Maxamed Cali-Gaas oo Kaamil-ah.